> Resource > YouTube > YouTube ma ciyaari doono? Download YouTube Flash Player ama Isku day HTML5
YouTube loo isticmaalaa in lagu sii qulquli videos isticmaalaya video ah qaab Flash iyo Adobe Flash Player. Ma waxay ahayd ilaa 2010 in YouTube bilowday tijaabo ah oo ka gaabsadeen-in HTML5 si noqon doonnaa in aad si aad u daawato video YouTube la ciyaaryahan HTML5 awoodaan.
Sidaa darteed, haddii YouTube ku guuldareysto inuu ciyaaro, waxaa laga yaabaa in ay leedahay wax ay sameeyaan la ciyaaryahan YouTube Flash . Xalal ayaa duwan tahay sida ay madal loo isticmaalaa in lagu Radidiyaha ah videos YouTube sida ku qoran hoos; on PC ah, qalab Android-ku-saleysan ama qalabka macruufka.
Seenyada 1: YouTube ma ciyaari doonaan PC ah
Seenyada 2: YouTube ma ciyaari doonaan Device ah Android ku salaysan
Dhacdada 3: YouTube ma ciyaari doonaan macruufka Devices
Seenyada 1: YouTube ma ciyaari doonaan PC
Waad weyn lagu talinayaa si loo soo dajiyo ugu dambeeyay ee Flash Adobe Player raacaya tallaabooyinka soo socda:
Habka 1: Ku rakib YouTube Flash Player
1. uninstall version wayn ee YouTube Flash Player iyo rakibi mid ugu dambeeyay. Download uninstaller rasmi ah Adobe ee halkan . Orod barnaamijka dooro nidaamka qalliinka saxda ah, ka dibna uninstall Flash .
2. Raac Adobe ee tilmaamaha soo xaraynta ugu dambeeyay ee Flash Player u YouTube.
3. Marka aad file ka soo bixi, ka tago biraawsarkaaga hore, ka dibna loo soo dajiyo version la casriyeeyay ee Flash player.
4. Ugu dambeyn, mar la furo biraawsarkaaga iyo booqo YouTube. Hadda waa in aad si aad u daawato videos aad si guul leh awoodo.
Xaq-guji YouTube Flash player in laba baaritaan oo version waxaa hadda lagu rakibay on your computer.
Habka 2: Isku day YouTube HTML5 Player
Opt ee YouTube ee HTML5 tijaabo u ciyaaro videos la YouTube HTML5 ciyaaryahan halkii YouTube Flash player. Ku darista & html5 = True dhammaadka URL video YouTube in ay isticmaalaan YouTube HTML5 ciyaaryahan ku meel gaar ah. Read more galay habab kale oo ay daawadaan YouTube aan Flash .
Seenyada 2: YouTube ma ciyaari doonaan Device An Android ku salaysan
Qaar ka mid ah dadka isticmaala ayaa soo wariyay in YouTube ma ciyaari doono ay telefoonada Samsung Android marka ay isku dayaan in ay ka ciyaaro HQ, halka qaar kalena ay qaar ka mid ah ayaa sheegay in YouTube ma ciyaari sabab u ah isku dhacyada la Twitter ee app doonaa. Halkan ka mid ah xal u xaliyo arrinta noocaas ah.
1. Haddii aadan ka ciyaari kara wax video (YouTube ma aha oo kaliya) telefoonka muddo ka dib, kaliya saarto Twitter app rasmi ah, oo uu soo saaray Twitter, Inc., iyo waxa ay dib u soo dajiyo ka hor inta aanad siin isku day kale.
2. Haddii ay kaliya dhibaatada YouTube videos loo maqli karo, cusboonaysiiso app ee YouTube ka Market Android ay u version ugu dambeeyay.
3. Sida telefoonada HTC Android, isku day Flash HTC ka Player haddii ay ka jirto on your Android.
Maskaxda ku hay in dhamaan macruufka qalabka sida iPad, iPod iPhone ama, ma taageeraan videos Flash on website. The app YouTube pre-ku rakiban yahay habka kaliya ee si aad u daawato videos on YouTube qalabka macruufka. The app YouTube si fiican u shaqaynayaan, laakiin haddii dhibaato soo baxdo, waxaad isku dayi kartaa tan. First of dhan, hubi in aad WiFi ama 3G ka shaqeeya. Marka labaad, isku day in la xiro dhammaan Chine in ay hadda socda. Markaas dib-u bilaabida app YouTube. Reboot qalab aad haddii in uusan qaadan saamayn.
1. hoos u qabo suulkaaga icon ah in ay iyaga oo dhan gariir aad u hesho, kadibna la xiro ee Chine furan.
2. In ay qabtaan guriga button daray awood button isku mar dhowr ilbidhiqsi in ay xirto iyo guuleysatey qalabka macruufka.
Sida loo Daawo YouTube aan Flash laakiin HTLM5 Player